Xisbiga Xasan Sheekh Oo Ka Hadlay Xayiraadii Shariif Kuna Baaqay Shir Deg-Deg Ah -News and information about Somalia
Home Warkii Xisbiga Xasan Sheekh Oo Ka Hadlay Xayiraadii Shariif Kuna Baaqay Shir Deg-Deg...
Xisbiga Xasan Sheekh Oo Ka Hadlay Xayiraadii Shariif Kuna Baaqay Shir Deg-Deg Ah
Xisbiga Midowga Nabadda iyo Horumarka UPD ee uu hogaamiyo Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si kulul u Cambaareeyay falkii shalay dowladda federaalka ku xayirtay Sheekh Shariif iyo wafdigii la socday oo ku wajahnaa Kismaayo.
Xisbiga UPD ayaa uga ka digaya in hay’addaha qaranka ee bixiya adeegga guud loo isticmaalo dano gaar ah oo aan waafaqsaneyn dastuurka KMG ah qodobkiisa 33-aad.
Sidoo kale Xisbiga Midowga Nabadda iyo Horumarka UPD ayaa Xukuumadda Soomaaliya ku eedeeyay inay ku tumaneyso xoriyadda lama taabtaanka ah ee Dastuurka damaanad qaaday.
Xisbiga Midowga Nabadda iyo Horumarka UPD ayaa saamileyda siyaasadeed ugu baaqay inay isugu yimaadan Shir deg deg ah oo looga tashanayo xad-gudubka ka dhan ah xuquuqaha Dastuuriga ah.
Hoos ka Akhriso War-saxaafadeed ka soo baxay Xisbiga Xasan Sheekh.
Previous articleYuusuf Garaad oo si Cajiib ah kaga falceliyay Hadalkii Sheikh Shariif ee maanta
Next articleDHAGEYSO: Xildhibaan ka digay in gaadiidkii lagu qabsaday Ceel-Saliini lagu soo weeraro Muqdisho
XOG: Konteenar ay ku jiraan waxyaabo qarxa oo lagu qabtay dekadda...
Sheekh Shariif oo James Swan u gudbiyay dacwac ka dhan ah...